Xalfad sagootin ah oo xalay Muqdisho loogu sameeyay wasiirkii hore ee amniga Qaranka | POHSOMEV.COM
Xalfad sagootin ah oo xalay Muqdisho loogu sameeyay wasiirkii hore ee amniga Qaranka
Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen shaqaalaha wasaaradda Amniga Qaran ayna ka qeybgaleen xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa xalay lagu qabtay hotelka Siyaad ee magaalada Muqdisho.
Wasiir ku xugeenka wasaarada amniga Ibraahin Yaroow oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in wasiirkii hore ee amniga uu wax la taaban karo qabtay, isagoo ku tilmaamay inuu yahay wadani firfircoon oo howlkar ah.
Mudane C/lariin Xuseen Guuleed wasiirkii hore ee amniga Qaranka oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in mudadii 20-ka bilood aheyd ee uu hayay xilka wasaaradda amniga Qaranka uu wax badan qabtay, isagoo hoosta ka xariiqay in xilka uu iska casilay uu ahaa mid aad u daal badan.
“mudadii Labaatanka bilood aheyd een hayay xilkaasi wax badan ayaa noo qabsoomay, xilkaasina wuxuu ahaa mid daal badan, soo jeed badan mudadaasi habeenki aan ugu hormaro Labada saqda dhexe ayaan seexan jiray marna 4-ta, tiiyoo ay sii dheertahay howshii maamulka wasaaradda” Ayuu yiri C/kariin Xuseen Guuleed Wasiirkii Hore ee Amniga Qaranka.
Mas’uuliyiintii kala duwanaa ee ka hadashay munaasabadaasi ayaa wasiirkii hore ee amniga ugu hambalyeeyay dadaalkii farabadnaa ee uu muujiyay mudadii uu xilka hayay, waxana wasiirka lagu sii sagootiyay niyadsami iyo suugaan muujineysay in wasiirku yahay halyeey wadani howlkar ah.